SP-L08 SOICARE ၃၀၀ မီလီမီတာကြက်သွန်နီခေါင်းမှောင်မိုက်သစ်သားစပါးရနံ့သစ်ရနံ့သင်းပျံ့သောဆီအနှံ့ပျံ့နှံ့မှု၊ တရုတ် SP-L08 SOICARE ၃၀၀ မီလီမီတာကြက်သွန်အခေါင်းမှောင်မိုက်သောသစ်သားစပါးရနံ့သင်းသင်းသောရနံ့ထုပ်ပိုးမှုထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ စက်ရုံ - Sunpai Industries Limited
အနိမ့်အမိန့်အရေအတွက်: 100 ပိုငျးပိုငျး
အသေးစိတ်ထုတ်ပိုး: 53.3x36x35cm / 12 Pieces
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: 100000 pieces one month
အခိုးအငွေ့: aromatherapy with cool mist, it working quietly, very suitable for use in life and work. With capacity of 300ml, the mist can last more than 10 hours. The mist output of this diffuser is about 60-70ml/h, it suit space 20-30㎡.
လုံခြုံမှု: Designed with auto-off function, the diffuser will stop working automatically when water runs out, or time is up.
Light က: This aroma diffuser has7colorful LED lights. Also, each color has dim and bright options, that means the light can cycle with 14 colors. Or, you can set it to one fixed color.
ပစ္စည်း ABS + PC + PP
ယူနစ်အရွယ်အစား .16.8 * 14.8cm
အရောင်သေတ္တာအရွယ်အစား 17 * 17 * 16.5cm
စက္ဏူထူအရွယ်အစား 53.3 * 36 * 35cm
ကဘ / သေတ္တာများ 7.50 ကီလို
GW / ပုံး 8.50 ကီလို